पुर्नजन्मको पाँच बर्ष: कसरी सम्झुँ म त्यो कालो दिन? – Gulminews
Home/साहित्य/पुर्नजन्मको पाँच बर्ष: कसरी सम्झुँ म त्यो कालो दिन?
पुर्नजन्मको पाँच बर्ष: कसरी सम्झुँ म त्यो कालो दिन?
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७५ असार १२, मंगलवार ०४:३८ मा प्रकाशित
त्यो कालो दिनको याद आज पनि आईरहेछ । झलमल्ल घाम त लागिरहेको थियो तर त्यस दिन मैले केही देखेको थिईन । संसार अँध्यारो थियो । जन्मे पछि मर्नु त छँदै थियो तैपनि सायद मान्छेलाई धेरै बर्ष बाँच्ने रहर हुन्छ होला । यति कुरा गर्दा कोही मरेका कुरा वा घटना दर्साउन थाले जस्तो नहोस कसैलाई । तर पुर्नजन्ममा अघिल्लो जन्मको कहानी लेखौँ लेखौँ लाग्यो ।
मानिसहरु रुन्छन । रुनु, हाँस्नु, रिसाउनु, खुशी हुनु, डराउनु त प्रकृतिको नियम हो । त्यसैले आजको दिनमा त्यो दिन के भयो सम्झने कोशिस गर्दैछु । सबै थाहा छ तर केही पनि याद छैन । म अज्ञात थिए, अज्ञात नै छु । कहिलेकाहीँ एकोहोरो टोलाउँदा होइनकी झैँ लाग्छ । मैले धेरै सपना देख्छु, त्यो सपना कुनै घटनासँग मेल खान्छ तर खुट्टा तिर हेर्दा खाटा देखिन्छन र शरिर भरी हेर्दा दागहरु देखिन्छन् ।फेरी इष्टमित्रले पनि सत्य घटना जस्तै कुरा गर्छन् । मलाई पत्यार लाग्दैनकी बरु म अझै पनि सपना भित्रको सपनामा डुबुल्की मारिरहेको छु कि जस्तो लाग्छ ।
म यो कुरामा सत्य छु कि म मेरो जन्म दिने आमाको ममता, आँशु, हाँसो, बुवाको साहस र आत्मबल श्रीमतीको धैर्यता र माया, छोराछोरीको आशाको खम्बा अनि दाजुभाईको सहयोग त्यसैगरी दिदिबहिनीको निश्वार्थ प्रेम, साथीभाईको साथ र समर्थन सँगै छु । यो कुरालाई म नकार्न सक्दिन । १५,७६,८०,००० (१५ करोड ७६ लाख ८० हजार) सेकेण्ड, २६,२८,०००(२६ लाख २८ हजार) मिनेट, १८२५ दिन, २६० हप्ता, ६० महिना गर्दागर्दै समग्रमा ५ ओटा बर्ष, ३० वटा ऋतु पनि बितिसकेछन्
कुरा २०७० सालको हो यो । २०७० साल जेठ महिनाको ३० गते मसान्त षष्ठी तिथिको दिन दिउँसो करिव ४ बजेर १५ मिनेट सम्म म सबै कुरा जान्दथे तर ४ बजेर २० मिनेट पछी….
आज त २०७५ सालको असार दोस्रो हप्ता चल्दै छ । गत ३१ गते मसान्त र विहिवारको ठीक ५ बर्ष पहिले म त्यतिबेला मुसिकोट नगरपालिका वडा नं.९ अन्तर्गत श्री ददल्का माध्यमिक विद्यालय अर्लाङकोटमा अध्यापन गर्ने गर्थेँ । इलामका दाजु महावीर बस्नेत (निशान) भने श्री सितापुर उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापन गर्नुहुन्थयो । म मेरा सहकर्मीहरु निमा सापकोटा र बुद्धिमणि खरेल सँगै थिएँ त्यो बेला सँगै हुनुहुन्थ्यो महाबिर दाजु पनि । कसैलाई घर जानुपर्ने, कसैलाई पर जानु पर्ने । म आफ्नो घर मुसिकोट जानु पर्ने र सहकर्मी शिक्षिका निमाको बसोबास वामी, उहाँ पनि घर जानु थियो । महाबीर बस्नेत र बुद्धिमणि खरेल आ–आफ्ना काममा पर जानु पर्ने थियो । त्यसैले सबैले तालमेल मिलाएर सँगै यात्रा थालेका थियौ ।
हामीहरु मात्र हैन यात्रामै अर्का गुरु रामबहादुर मल्ल र हटिया निवासी मेघ बहादुर अधिकारी पनि भेटिए । रुपन्देहीका ट्रक चालक यम राना र सहचालक मोहन दाहाल सँगै हामी सबै जना हाँसो मज्जा सँगै यात्रा गर्दै थियौँ । हामी चढेको लु१ख ७५५७ नम्बरको ट्रक चढेको पाँच मिनेटमै गुडीरहेको बाटोबाट एक्कासी तल खस्यो । सरासर मोटरबाटोमा गुडीरहेको गाडी एक्कासी तलतिर झर्दै गर्दा कसैको दिमाग ठाउँमा रहने कुरै भएन । म पनि त्यो घटनाको बारेमा केहि भन्न सक्दिन र भनौ पनि कसरी नाटक पनि हेर्नेलाई मज्जा हुन्छ रे । नाटक देखाउनेलाई त कति पिडा हुन्छ होला है न र? त्यसैको पात्र भयौ हामी सबै जना । एक्कासी ट्रक दुर्घटना हुँदा गाडीमा सवार सबै जनालाई अनगिन्ती चोटैचोट लाग्यो । कसैलाई टाउकोमा गम्भीर चोट त कसैलाई शरिरका विभिन्न भागमा चोटैचोट लाग्यो । म पनि अछुतो रहने कुरै भएन । शरिर र खुट्टामा लछारपछारको पात्र भए म । चालक र सहचालकको अवस्था उस्तै । म शुरुमा बेहोस भित्रको होसमा थिए । तर पछि स्वयं अचेत ।
तत्काल दुर्घटनास्थल वरिपरिका मनेवाका बासिन्दाको सहयोगमा बाग्लुङ्को खर्बाङ प्रहरीको आइपुग्यो । पुर्नजन्मको लागी खर्बाङकै आरोग्य मेडिकल हलमा सामान्य उपचारको क्रममा रह्यौँ । भन्छन् मान्छेलाई मान्छे चाहिन्छ मर्दा र पर्दा साच्चैँ रहेछ त्यो कुरा पनि । म यहाँ नाम जपेर भ्याँउदिन असङ्ख्य शुभचिन्तकहरु तथा मेरो जीवनको हरेक पलमा सहयोग गर्ने आदरणीय गुरु न्यू शाइन स्टार बार्डिङ स्कुल अर्लाङ्कोटका निर्देशक एवं जनजागृति उमाविका शिक्षक डिल बहादुर बुढाथोकी, खर्बाङ प्रहरी चौकी, सामुदायिक रेडियो पुष्पाञ्जली ९७.४ मेगाहर्ज वामीटक्सार लगायत रिघा मनेवाबासी दाजुभाई, दिदिबहिनीहरु, मेरो घर परिवार, साथीभाईहरु छरछिमेकहरु सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार समेत व्यक्त गनै चहान्छु ।
कठै एक आमाको मन, मेरी दिदि कमलाले मलाई सम्हाली रहनुभएको थियो । खर्बाङ्को बजारमा खचाखच थियो मानव जातीहरुको । पछि खबरमा आएको कुरा गर्देछु म । त्यहाँ कठै भन्ने आवाज अनगिन्ती सुनिन्थ्यो । म चिन्दिनथे कसैलाई । त्यसपछि हामी एम्वुलेन्सको सहयोगमा पोखरा तर्फ गण्डकी हस्पिटलमा प्रस्थान गरी पुर्नजन्मको लागि वास्तविक गन्तव्यको स्वीकार गरी औषधी उपचार पछि आज यो २०७५ सालमा पाँच बर्ष वितेछ यसरी फेरी यो कहानी लेखौ लेखौ लाग्यो । पात्रो फर्काएर हेर्नुस न २०७० सालको जेठ ३० गते भने शुक्रबार थियो भने २०७५ सालको जेठ ३० पनि शुक्रबार नै परेछ ।